Azum Ahia – Igbo Services
NNPC ga ebubatakwu nmanụ PMS na Abuja
AfCFTA ga-apụta dị ka mpaghara azụmaahịa efu kacha ukwuu n’ụwa…
MTN, Mafab Communications ga-ewepụta ọrụ 5G n’August –…
Onyeisiala Buhari na-achọ nyocha nke 2022 MTEF ka mbelata mmefu ego…
Afrika Agum Akwuwo Ahuike Egwuriegwu Ihe Emereme Mba Uwa Naijiria
Gọvanọ Soludo sị na atụmatụ onye apụla ezi abịala na njedebe ￼
CHIDI IGWE	 Apr 6, 2022 0
Na abali anọ nke ọnwa Epril ka aka n’achi steeti Anambra bụ ọkanmụta Chukwuma Soludo siri na atụmatụ ‘Sit at Home’bara n’isi njedebe. Okwu banyere atụmatụ a dị ka a ga-asị na ọ bụzi ọkpụkpụ gbadoro mmadụ…
Mba Ghana emehela ụzọ esi ebupu ngwa-ahia
CHIDI IGWE	 Mar 30, 2022 0
Onyeisiala mba Ghana bụ,Prezidenti Akufo-Addo ekwuputala na ha emehela ụzọ si ebu mgwa-ahia bụ nke ha mechiri kamgbe afọ abụọ gara aga,iji wulita ọnọdu akụlụba. Imepe ụzọ a bụ nke ụmụafọ Ghana n’ele anya ya kamgbe,bụ ndi atubata ma na…
Lee ihe anyị hụrụ na iwu Sit at Home n’mpaghara owuwanynwu
CHIDI IGWE	 Mar 28, 2022 0
Ahia Main Market dị n'Onitsha n’ụtụtụ ụbọchị monde dika ebe agbara ọsọ agha. Ndị ahịa apụtaghị maọlị belụsọ ndị mmadụ na-agara onwe na nke nke n'okporoụzọ. Ọdọ ụgbọala ebe ndị ọkwọ ụgbọala na-eme njem aga-ebe dị iche iche n'ala Igbo…
Ipob Sit at home: etu osi metuta mpaghara owuwanynwu
CHIDI IGWE	 Jan 17, 2022 0
Ụzọ dị iche iche tọgbọ chakoo n'isiobodo steeti a, dịka ọtụtụ ndị mmadụ apụtabeghi ịgara mkpa ha. N'agbanyeghi na ọ bụ ụtụtụ Mọnde, ụfọdụ ebe ndị na-ekwokarị ekwo tọgbọ chakoo. Ọtụtụ ụgbọala anaghị aga n'okporoụzọ New Haven dị…
Akaọrụ iri a na-agbara ọsọ ndị ọzọ ji eriju afọ
CHIDI IGWE	 Jan 13, 2022 0
Ọtụtụ oge ka ndị mmadụ na-arụ ọrụ ndị mmadụ na-akpọ n'imi, ọrụ ndị e nwereike ịsị "tụfịakwa, ọ bụghị m ga-arụ nke a". Mgbe a na-eto, a jụọ "kedụ ihe ị chọrọ ịbụ mgbe i toro?" ọtụtụ ndị na-ekwu na ha chọrọ ịbụ dọkịta, injinia, ọkaiwu,…
EFCC nwetara ego di N152bn, $386 million n’afo 2021
CHIDI IGWE	 Jan 12, 2022 0
Ụlọ ọru Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) kwuru na ha nwetara njeri naira otu nari iri ise na abụọ na ụma itolu na $386.22 million dola n’afo 2021. Mazi Wilson Uwujaren,onyeisi n’ahụ maka mgbasa ozi EFCC,mere ka amata…